W/Ganacsiga oo kala dirtay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Dhaqaalaha W/Ganacsiga oo kala dirtay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha
Wareegto ka soo baxday xafiiska Wasiirka wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu baab’iyay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed.
Qoraalkan ka soo baxay wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Asniin ah la baab’iyay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed.
Sababta ayaa lagu sheegy inay jiraan labo rug ganacsi oo ka dhisan magaalada Muqdisho.
Wareegtadan oo ay ku saxiixnayd Khadra Axmed Ducaale Wasiirka Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa lagu sheegay in wasaaradu ay soo sheegi doonto xilliga la qabanayo doorashada .isla markaana rugaha ganacsiga ee ka jira maamul goboleedyada ay si toos ah ula soo xiriiraan Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha.
Halkan ka aqriso wareegtada
Previous articleGuddi xaqiiqo raadin ah oo maanta gaaray deegaanka Barriire
Next articleDowladda Soomaaliya oo lagu wareejiyay qalabkii lagu maamuli lahaa Hawada Soomaaliya